Vectors - Creativos khadka tooska ah | Creativos Online (Bogga 2)
+ 20 ilo bilaash ah oo kusaabsan dabeecada
Xulashada in ka badan labaatan kheyraad bilaash ah oo ku saabsan dabeecadda ku habboon mashaariicda deegaanka.
Xulashada in ka badan labaatan vector ubax oo bilaash ah. Akhriso oo soo dejiso xulashadan cajiibka ah hadda!
Xidhmada Vector si loo horumariyo loona abuuro infographics si deg deg ah, dhakhso leh oo soo jiidasho leh. Sii wad aqrinta oo soo dejiso kheyraadkan "
Qalabka Arooska: Xirmo Vector Lacag La'aan ah
Uruurinta walxaha vector-ka si loo daboolo oo looga shaqeeyo aroosyada iyo dabaaldegyada kale sida baabtiisyada ama wadajirka. Miyaad seegaysaa?
Xirmo bilaash ah oo ah noocyada Fiktooriya-qaabeeya iyo sawirro ku habboon si loo dejiyo goobta wixii taariikh ama gothic project ah.
20 ilo bilaash ah oo loogu talagalay Maalinta Jacaylka
Ururinta in kabadan labaatan kheyraad sawireed bilaash ah oo loogu talagalay Maalinta Jacaylka oo ay kujiraan kaararka, xaashiyaha, waraaqaha.
Freepik waxay ku siisaa xirmadan vector-ka tayo sare leh bilaash. Hada ku bilow inaad u isticmaasho hadiyadaha ugu fiican iyo walxaha qurxinta
Xirmo xirmo faafis ah oo vector ah oo bilaash ah oo aadan seegi karin inaad awood u yeelatid sameynta ugu fiican ee suurtogalnimada heer xirfadeed
Ku dar xirmadan kheyraadka sawir-gacmeedka maktabaddaada oo naftaada ha u kaxeeyaan naqshado cusub.
Mashruucan waxaad ka heli doontaa 8 kheyraad sawir gacmeed oo bilaash ah oo aad ugu adeegsan karto naqshadahaaga xagaagan. Ka faa'iideyso iyaga! Freepik ayaa na siiyay iyaga.
Saaxiibadeena Freepik waxay akhristayaasheena siinayaan xirmo 100 vector calligraphic gaar ah oo aan lagu faafin doonin degel kale.
Saddex meelood oo aad ka heli karto sawir-gacmeedka lacag-la'aanta ah ee bilaashka ah ee aad ugu baahan tahay mashruucaaga. Ka faa'iideyso oo ka faa'iideyso iyaga.
Ma jirto hab ka wanaagsan oo loogu hambalyeeyo ciidaha iyo sannadka cusub oo ka badan kaararka boostada. Qoraalkan waxaad ka heli doontaa 11 kaararka kirismaska ​​oo bilaash ah si aad u soo dejiso.
Haddii aad raadineysid khariidado khariidado bilaash ah waxaad nasiib u leedahay: waxaad ka heli doontaa halkan, dhammaan waddamada adduunka. Gali oo sii wad aqrinta ku saabsan sida loo helo.
Soo dejiso 5 xirmooyin dulinka ubaxa oo bilaash ah si aad ugu adeegsato naqshadahaaga. Iyagu waa bilaash oo waad ku isticmaali kartaa naqshado kala duwan maaddaama ay jiraan kuwa badan oo laga kala dooran karo.
9 xubnaha jidhka bini'aadamka ee vectorized
20 Jilayaasha Diyaarka u ah Jacaylka
Waxaa jira wax yar oo ka haray imaatinka Maalinta Jacaylka, taariikhda khayaaliga ah ee Maalinta Jacaylka ee ciyaarta badan siisa ...
Hadiyadaha kirismaska ​​iyo fallaadhaha qaybaha
Waxaan idinla wadaagayaa vector-yada hadiyadaha iyo qaybaha Kirismaska ​​ee aad idinku qurxinaysaan nashqadahaaga. Soo degso: Dabeecadaha hadiyadaha iyo ...
Dibnaha, afka iyo indhaha
Feektoro aad u fiican oo bushimaha, afka iyo indhaha ah oo aad ku soo dejisan karto bilaash. Waad ku tafatiri kartaa Sawirka. Download: Cilmiga xoolaha, bushimaha, afka iyo ...
Kaararka Kirismaska ​​ee Vectors
Ku soo dejiso kaararka kirismaska ​​walxaha dulinka ah ee aad ku beddeli karto barnaamijka vektorka. Degso: Kaararka Kirismaska ​​ee dulinka
Haddii aad u baahatid xoogaa buufinno hawo kulul ah oo vector ah, halkan waxaan kula wadaagayaa feyl aad wax kaga beddeli karto Adobe Illustrator si ...
Vectors waa muuqaalo vector ah oo aan ku saxi karno barnaamijyo caan ah sida sawir gacmeedka iyo sawirqaade, laakiin waa inaan helnaa ...
Feektoro baako wanaagsan. Xariir: Download
Feektoor fallaar aad u fiican, oo aad ku tafatiri karto adobe illustrator. Xariir: Download
Casharro heer sare ah oo ku saabsan sida loo tijaabiyo Photoshop. Bilowga waxay waxyar ka sharaxayaan isticmaalka qalinka ilaa ...
Ma raadineysaa vectors of Khadadka qalooca? faylkaan waxaad kaheleysaa vectors aad ufiican oo aad ugu isticmaasho mashaariicdaada naqshadeynta….
Haddii aad raadineyso warqad ballan ah vector pack vector, halkan waxaan ku haynaa waxaad u baahan tahay. Gali oo soo dejiso vectors-ka bilaashka ah ee axdiga iyo waraaqda loogu talagalay naqshadahaaga.